Yakkawwan Motaraa Finfinnee keessatti dagaagaa jiran - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Poolisii Finfinnee
Konkolaachiftoota motaraa fi yakkawwan Finfinnee keessatti dagaagaa jiran ittisuuf poolisiin deeggarsa hawaasaa akka fedhu beeksise.
ALI Caamsaa 28 bara 2011 guyyaa keessaa sa'aatii 10 fi wallakkaa irratti magaalaa Finfineett dubartii maallaqa qabattee baankii galchuuf deemaa turterratti saamichi raawwateera.
Dubartiin maqaan isaanii aaddee Biruktaayit Geetahun jedhaman maallaqa isaanii baanki Abisiniyaa damee 22 galchuuf adeemu..
Osoo baankicha hingahiin dura saamtoonni motaraan adeeman maallaqicha harkaa butu.
Haatii kunis maallaqicha feesitaalatti qabatanii akka turan namni isaan waliin turan obbo Alamaayyoo Girmaa poolisiitti himaniiru.
Mallaqicha harkaa butuuf wayita wal harkatti harkisanittis maallaqicha lafatti bittinaa'a. Namoonni fi eegdoonni naannichatti argamaniis saamtoota ittisuuf yaalii taasisanii jiru.
Dubartittiinis qarshii kuma 405 qabatanii adeemaa kan turan yoo ta'u, isa keessaa kuma 300 ol hanbifachu danda'u isaanii poolisiin beeksiseera.
Kana malees motara saamtoonni itti fayyadamaa tura tokko to'annaa jala olfamusaa poolisiin himeera.
Image copyright Addis ababa Police Facebook page
Dubbi himaan Komishiinii poolisii magaalaa Finfinnee Komaandar Faasikaawu, Magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaa garaatti saamichi motaraan gargaarame akka gaggeefamu quab akka qaban himu.
Motaronni magaalattii keessatti saamicha irratti hirmaachu qofa osoo hintaane, balaawwan traafikaa hedduu irratti hirmaachu dabalii BBC'tti himaniiru.
Ogeessi kun akka jedhaniitti konkolaachiftoonni motaraa tokko tokkoos hayyama konkolaachistummaa sobaa qabatanii kan konkolaachisaniifi gabatee sobaa maxxanfachuun akka socha'an irra gahamusaa ni dubbatu.
Kana malees osoo gabatee hinqabaatiin bakkeewwan adda addaatii dhufuun Finfinnee keessa socho'aa jiraachu dabaluun himaniiru. Ammas seera qabatanii socha'u akka qabaatan waan amanameef sadarkaa motummaatti seera qabachiisuu xiyyeefannan hojjataa jira kan jedhan komaandarichi, rakkinichi yeroo gabaabaa keessatti fala ni argata jedhanii akka amanan himu.
Baatiiwwan sagal darban keessa qofaa motaroonni saamanii fiigan, kanneen seera tiraafikaa cabsuun qabaman kuma 10 ol to'annoo jala olfamusaanii Komaandar faasikaan BBC'tti himaniiru.
Komaandar Faasikaaw lakkofsi gabatee motaraa Oromiyaa fi Finfinneetti dijitii shan akka hin qaqabiin himanii, kanneen seeraan ala socho'anis gabatee isaanii konkolaataawwan biraa irraa fudhachuun waan socha'aniif, jiraattoonni yoo shakkan atatamaan qaama dhimmisaa ilaaluutti akka eeran gaafataniiru.
Akkasumas motoroota bakka maleefi dhooksaan dhaabbatanii jiraniifi kanneen lakkofsa gabatee hin qabaannee fayyadamuun balaa waan qabaatuuf jiraattoonni of eegannoo akka taasisaniif yaadachiisaniiru.
Viidiyoo Hattoonni obomboleettii da'oo godhachuun saaman kaameeraadhaan qabaman
Lixa Oromiyaatti baankonni saamamuu, waajjiraaleen gubachaa jiru jedhan aanga'oonni mootummaa